किन आमा जस्तै हुन थाले पिताहरु ? « Kakharaa
३ मंसिर, काठमाडौं । अनुशासन, भय र सम्मान मिलेर बनेको व्यक्तित्व थियो, पिताको । यो अघिल्लो पुस्तासम्मको कुरा हो । किनभने अहिले पिताको व्यवहार र भूमिका बद्लिएको छ । साथसाथै बच्चाले आफ्ना पिताप्रति राख्ने दृष्टिकोण र आस्था पनि फेरिएको छ ।
किनभने अहिलेका पिताहरु आफ्ना बच्चाका लागि अभिभावक वा मार्गदर्शक मात्र नभएर एक हितैषी मित्र बराबर हुन पुगेका छन् । विगतमा जस्तो पिताले आफ्ना बालबच्चासँग निश्चित दुरी राख्ने गरेका छैनन् । अहिले बच्चाका लागि पिताले विगतमा भन्दा बढी प्रेम दर्शाउन थालेका छन् ।
विगतमा पनि पिताले आफ्ना बालबच्चालई उत्तिनै प्रेम गर्थे । बालबच्चाको भविष्यप्रति उत्तिनै चिन्तित हुन्थे । तर, उनीहरुले आफ्नो भावनालाई व्यक्त गर्दैनथे । कसरी बच्चा हुर्काउने ? के गर्ने, के नगर्ने ? कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुराहरु पनि उति सोधीखोजी गर्दैनथे । उनीहरु आफ्नै परिपक्क अनुभवको आधारमा बालबच्चालाई स्वतन्त्र ढंगले हुर्कन दिन्थे । एक किसिमले आफ्नै बच्चासँग पनि दुरी बनाएर बस्थे, ताकि बच्चा आफुमाथि हावी नहोस् ।
आफुसँग थोरै भएपनि डर राखोस् । जब आफुसँग डराउँछन्, तब अनुशासन पालना गर्छन् । आज्ञाकारी हुन्छन् । यही सोचाईले विगतमा पिताहरुले आफ्नो बच्चासँग धेरै हेलमेल पनि हुँदैनथे । बच्चा रुनासाथ काखमा लिएर खेलाउने गर्दैनथे । बच्चाको समस्या सुनेर भावुक हुँदैनथे । तर, अहिलेका पिताको व्यवहार बद्लिएका छन् ।
आदिम विकासका क्रममा पिताको काम परिवारको सुरक्षा र भोजनको व्यवस्था गर्नु थियो । र, आमाको कम खानेकुरा पकाउनु, बालबच्चाको स्याहार गर्नुथियो । बच्चाको हेरचाह र प्रेम आमाले गर्थिन् । यी दुबैले आ-आफ्नो काम राम्ररी निर्वाह गर्थे । यो विकासक्रम लाखौ वर्षसम्म जारी रह्यो । तर, औद्योगिक क्रान्ति र फेरि संचार क्रान्तिले सबैकुरा बदलिदियो ।
सुत्नेबेला कतै तपाईं पनि गर्नुहुन्न यी गल्ती ?
१० मंसिर, काठमाडौं । कोही मानिसहरु आफ्नो बेड र तरिकासँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न
९ मंसिर, काठमाडौं । फूलका विरुवा रोपेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई स्याहार्ने कुरा पनि जानिराख्नु उचित
कब्जियतको घरेलु उपचारः बिहान खाली पेटमा नुनपानी
४ मंसिर, काठमाडौं । कब्जियतका समस्या कुनै पनि उमेरका मानिसलाई हुनसक्छ । संसारभर करिब २०
शरीरमा यी ९ लक्षण देखिए बुझ्नुहोस् कि बढिरहेछ मधुमेहको खतरा
३० कात्तिक, काठमाडौं । हरेक वर्ष १४ नोभेम्बरमा विश्व मधुमेह दिवस मनाइन्छ । यो दिन